War Deg Deg Ah Weerar Ismiidaamin ah oo Goordhaw ka dhacay Muqdisho iyo Faah faahino hordhac ah oo soo baxaya - iftineducation.com
War Deg Deg Ah Weerar Ismiidaamin ah oo Goordhaw ka dhacay Muqdisho iyo Faah faahino hordhac ah oo soo baxaya
iftineducation.com – Waxaa Goordhaw Qarax Xoogan uu ka dhacay agagaarka Xeradii Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho, waxaana lagu soo waramayaa in qaraxan uu ahaa mid ismiidaamin ah uu ka dambeeyay ruux naftiis hore .
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xooganaa oo laga maqlay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho , waxaana warar aan helnay sheegayaan in lala eegtay gaari ay lasocdeen Ciidamo katirsan Nabad Sugida gaar ahaan kuwa Gaashaan oo marayay agagaarka Xerada Afisiyooni ee Degmada Waabari.
Wariye kusugan halka uu qaraxu ka dhacay ayaa goordhaw noo xaqiijiyay in uu aray labo gaari oo gubatay , gawaaridaasi ayaana mid kamid ah la sheegay in uu ahaa gaari ay wateen Ciidamada Gaashaan .
Ciidamada Dowlada ayaa gabi ahaan xiray halka uu qaraxu ka dhacay, waxa ayna dadka u diidayeen in ay usoo dhawaadaan goobtaasi, waxaana la maqlayay qaraxa kadib rasaas ay fureen Ciidamada Dowlada.
Gawaarida Amplaasta ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray kuwaasoo halkaas ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay Qaraxaasi, wali ri rasmi ah looma hayo tirada dadka ku dhintay qaraxaasi ismiidaaminta ah.
Gabdhahaan qaab casri ah ayeey u soo dhaweeyeen sanadka cusub Daawo muuqaalka
Daawo Sawirada” Warar dheeraad ah oo laga helaayo Qaabta uu u dhacay Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee goordhow ka dhacay Muqdisho